M/weyne Faroole oo hawlo nabadeed u tagay magaalada Qardho, Karkaar – Radio Daljir
M/weyne Faroole oo hawlo nabadeed u tagay magaalada Qardho, Karkaar
Qardho, Mar 12 -Wefti balaaran oo uu hogaaminayo madaxwaynaha dowladda Puntland Dr Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroolle ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar.
Dad wayne tiro badan oo ka mid ah bulshada magaalada Qardho, maamulka gobolka iyo degmada Qardho ayaa madaxwaynaha iyo weftigiisa soo dhoweyn balaaran ugu sameeyay wadada isku xirta Qardho iyo Garoowe.
Madaxwaynaha ayaa waxaa uu kormeeray qaar ka mid ah xeryaha dadka barakacayaasha ee ku yaala magaalada Qardho, jeelka cusub ee degmada Qardho iyo saldhigyada booliska, waxaana sidoo kale uu kulamo la yeeshay maamulka gobolka Karkaar iyo degmada Qardho.
Madaxwaynaha oo shir jara’id ku qabtay hoteelka Alla Aamin ee magaalada Qardho ayaa waxaa uu tilmaamay inuu magaalada Qardho u tagay heshiisiinta laba beelood oo walaalo ah, oo dhamaadkii sanadkii lasoo ladhoofay ee 2011 ay colaadi ku dhexmratay miyiga degmada Rako ee gobolka Karkaar.
?Waxaan Qardho u imi, in aan heshiisiyo beelaha walaala ah, arin kale uma socon waxaana rajeynaa in ay si nabad ah ku dhammaadan khilaafka ka dhex taagan?.ayuu yiri m/weyne Faroolle.
Lama oga inta uu qaadan doono safarka madaxwaynaha uu maanta kusoo gaaray magaalada Qardho.